के छ अध्यादेशमा? :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
के छ अध्यादेशमा?
शुक्रबार जारी अध्यादेशका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सबै पदमा एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली लागू नहुने व्यवस्था छ । कोटाबाट प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा पूर्ण रूपमा एकल संक्रमणीय पद्धति लागू नहुने भएको हो । अध्यादेशअनुसार महिला र खुला पदका लागि एकल संक्रमणीय पद्धति लागू भए पनि दलित, अल्पसंख्यक वा अपांगता कोटामा यो प्रणाली लागू हुने छैन। यो खबर हामीले आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।
यस्तै, कुल जनसंख्यालाई गाउँपालिका÷नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख (७५३ को दोब्बर) ले भाग गरी आएको योगफललाई पुन:एक हजारले भाग गरी स्थानीय तहका पदाधिकारीले दिने मतको भार १८ निकालिएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुस १४, २०७४, ०६:२३:५८